Dirmannaa Oromummaa Sagalee Ta’uufiin FXG Uummata Keenya Maqaa Liyyuu Ayiliitiin Lafasaa Irraa Godaanaa Jiruuf Barattoonni Yuunibarsiitii Jimmaa Mooraa Main Campus Hiriira Mormii Dhageessisaa Jiru. | QEERROO
Akkumaan eda galgala, waraqaan waamichaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo moorichaatiin raabsamaa kan ture, sagalee taaneef Uummata keenya ardaa dhabeef birmanna jechuun Doormiwawan hundarratti waraqaan waamichaa shoobamaa bule jedhu.
Foolisoonni Mooraas eda galgala Tuffii Qeerroo Bilisummaa agarsiisuuf waraqaa sana bariin ka’aanii uttuu buqqaasaa jiranii, naannoo Doormii Abdiisaa Aagaatti tarkaanfii Qeerroon foolisoota sanneen irratti fudhachuu dubbatan.
Amma sa’aatii 2:00 eegalee akkuma waamicha beeksisaan walii taasisanitti Fincila Xumura Garbummaa haalaa finiinsanii jiru. Mooraa Jimmaa Yuunibarsiitii keessa sagaleen dhaadannoo hanga Lafa galagalchuu ka’utti dhagaa’amaa jira.
Gaaffiiwwan Biyya Oromiyaa
1, Dararaan uummata Oroomoorra gahaa jiru haa dhaabbatu
2, Gogaa saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii uffatanii uummatatti waraana labsuu Wayyaanee nii balaaleffan! Addatti Oromoon abbaan keenya haati keenya manaaf ardaa dhabanii akka Sinbiraa ala jiraachuu dhaabbachuu qaba!
3, Baajetni Uummata Maqaa Lola Liyyuu ayiliin walitti qabame uummata keenya dararaamaa jiraniif hatatamaan fala laachu qaba!
4, Lafa keenyarraa buqqaa’uun haa dhaabbatu!
5, Mootummaan Ce’umsaa nageenya biyya keenya eegsisu nuuf haa dhaabbatu
Gaaffiiin barattootaa moorichaaf
1,Barattoota Mooraa Kitoo Furdisaa barattoota Oromoo Injineringii hidhaan dararaa jirtan kanneen torbee kana keessa qabdan nuu baasaa!
2, Kaalid Abbaa Tamaam Abbaa Bulguu barattootaan gara Qaallittiif Makalaawwittin isin erga jechuun bilbilaan isa barataa doorsisu dhaabuu qaba!
3, Mirgi dhala namaa mirgi Oromoo haa kabajamu
4, Saboota cunqurfamo nurratti ijaaruun saba keenya Oromoo Arrabsuun, xiqqeessuun dhabbachuu qaba!
5, Mooraan mooraa Siyyaasaa miti foolisootaaf, waajijiraalee Siyyaasa Wayyaanee banamaa jiran moricha keessa baafamuu qabu!
Jedhu gaafataa juraachuun dhagaa’ame.
Suuraaf Video akka arganneen gabaasna